Ku qodbay qodxan, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Markii Ciise lagu xukumay dambi istaahila in la dilo, askartii waxay qodxeen taaj qurux badan oo madaxiisa saareen. (Yooxanaa 19,2). Waxay u geliyeen dhar guduudan oo majaajiloodeen, oo waxay isagii ku yidhaahdeen, Nabad, Boqorka Yuhuuddow.
Askartu waxay u sameeyeen inay naftooda ku raaxaystaan, laakiin Injiillada waxaa ka mid ah sheekadan oo qayb muhiim ah ka ah xukunkii Ciise. Waxaan ka shakisan yahay inay dhexmaraan sheekadan sababtoo ah waxay leedahay run macno leh - Ciise waa boqorka, laakiin xukunkiisa waxaa ka horreeya diidmada, jees jeeska, iyo silica. Wuxuu leeyahay taaj qodxan leh, maxaa yeelay isagu waa kan xukumaaya duni xanuun badan, oo isagu wuxuu ahaa boqorka dunidan musuqmaasuqa ah wuxuu muujiyey xuquuqdiisa inuu xukun ku xukumo isaga laftiisa xanuun. Wuxuu qariyey qodxan taaj (oo keliya xanuun weyn) (isaga ayaa la siiyay awood).
Muhiimad noogu ah anaga
Taajadii qodxanta ahayd sidoo kale waa mid nolosheena muhiim u ah - maahan qeyb si faneed filim goob joog ah oo aan ka carayno silica uu u soo maray Ciise inuu noqdo Bixiyahayaga. Ciise wuxuu yiri haddii aan rabno inaan raacno, waa inaan qabsanaa iskutallaabteenna maalin kasta - isaguna wuxuu si fudud u oran karaa waa inaan xidhnaa taaj qodxan leh. Waxaan ku xidhan nahay Ciise dheriga dhalaalay ee silica.
Oo taajkii qodxanta leh ayaa Ciise u leh isaga macnihiisu waa u wada dhammaan qof kasta oo raacda Ciise. Siduu Bilowgii sharraxay, Aadan iyo Xaawa way diideen Ilaah waxayna qaateen go'aan ah inay naftooda ku waagaan waxa shar ah iyo waxa wanaagsan.
Khalad ma aha inaad ogaatid farqiga u dhexeeya wanaagga iyo xumaanta - laakiin khaladaad badan ayaa ka jira marka la silco xumaanta maxaa yeelay waa dariiqa qodxan, waana jidka silica. Tan iyo markii Ciise u yimid inuu ku dhawaaqo imaatinka Boqortooyada Ilaah, layaab ma leh in aadanaha, oo isagu wali ka go'ay xagga Ilaah, wuu diiday oo wuxuu ku muujiyey qodxan iyo geeri.
Ciise wuu aqbalay diidmadani - wuxuu aqbalay taajkii qodxanta - oo qayb ka ahaa koobkii qadhaadhka ahaa ee silica silica waxa dadku ku silcayaan si uu noogu furo albaabkeenna si aan uga baxno adduunkan ilmada leh. Adduunyada, dawladuhu waxay qodxan madaxa ka saareen muwaadiniinta. Adduunyada, Ciise wuu ku silcay waxkastoo ay doonayeen inay isaga ku sameeyaan si uu inaga badbaadiyo adduunkoo dhan cibaado la’aanta iyo qodxan.
Adduunyada soo socda waxaa xukumi doona ninka ka adkaaday jidkii qodxanta - kuwa isaga u dhiibtay daacadnimadooda waxay kaalintooda ka qaadan doonaan dawladda abuuritaanka cusub.
Dhamaanteen waxaan la kulanaa taajkeenna qodxanta. Dhammaanteen waa inaan qaadnaa iskutallaabteenna. Dhamaanteen waxaan ku noolnahay dunidan dhacday waxaanan la wadaagnaa xanuunkooda iyo walwalkooda. Laakiin taajkii qodxanta iyo iskutallaabtii dhimashada ayaa la mid ah Ciise, oo annaga na weyddiista: “Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow. Waxaan rabaa inaan ku qanco. Harqoodkayga dushooda ku qaata oo wax iga barta; maxaa yeelay, waan qalbi qaboobaa oo qalbi libaax; si aad nasasho ugu hesho Semnium-kaaga. Maxaa yeelay, harqoodkaygu waa mid jilicsan, oo rarkayguna waa fudud yahay " (Matayos 11,28: 29).